केन्द्रीय सदस्य, एकीकृत राप्रपा (राष्ट्रवादी)
किशोर गुरुङ नेपालको राष्ट्रवादी फाँटमा चिनाईरहनु पर्ने नाम होइन । उहाँ यतिबेला एकीकृत राप्रपा (राष्ट्रवादी) को केन्द्रीय सदस्य तथा राष्ट्रिय युवा शक्तिको केन्द्रीय अध्यक्ष हुनुहुन्छ । उहाँ राप्रपा नेपालमा राष्ट्रिय युवा मोर्चाको केन्द्रीय अध्यक्ष हुनुभएको थियो । यस्तै राप्रपा नेपाल समानान्तरमा सहायक महामन्त्री तथा युवा संयोजक समेत हुनुहुन्थ्यो । उहाँ केशरबहादुर विष्टले नेतृत्व गरेको एकीकृत राष्ट्रवादी शक्ति निर्माण अभियानको केन्द्रीय सदस्य तथा युवा फाँटको संयोजक पनि हुनुभयो । स्पष्ट विचार र स्वस्छछवि भएका गुरुङसँग नेपालको समसामयिक राजनीतिक अवस्थाबारे गरिएको कुराकानी ः
— अहिलेको राजनीतिक अवस्था देश र समय सुहाउँदो छैन । देश विकराल बन्दै गइरहेको छ । देशको अवस्था सीमाभन्दा बाहिर छ । कुनैपनि बेला देशमा ठूलो दुर्घटना सम्भावना मैले देखेको छु । किनकी देशका ठूला दलका नेताहरु बाह्य शक्तिबाट संचालित छन् । देश र जनताप्रति उहाँहरुले कुनै दायित्व महसुस गर्नुभएको छैन । नेताहरु सत्ता र भत्तामै व्यस्त छन् । यो अवस्था आउनुमा बाह्य शक्तिकै ठूलो हात छ । देश र जनता सुहाउँदो राजनीति भएको छैन । प्रमुख दलहरु देशलाई आफ्नै विर्ताजस्तो मात्र गरिरहेका छन् । सत्तामा कसरी पुग्ने भनेर मात्र खेल खेलिरहेका छन् । जनताले चाहेको शान्ति र मेलमिलाप देखिंदैन । देशमा भुकम्प आएको तीन वर्ष भइसक्यो, जनताले कुनै राहत पाएका छैनन् । विदेशबाट आएका ठूला राहतहरु यिनै ठुला दलका नेता र कार्यकर्ताको घरघरमा पुगिरहेको छ । छिमेकी राष्ट्रले हामीप्रति असुहाउँदो व्यवहार गरिरहेको छ । त्यसको विरुद्धमा नेताहरु एकशब्द पनि बोल्न चाहिरहेका छैनन् । किनकी सत्ता र भत्ता उनैको प्रभावमा आर्जन गरिरहेका छन् ।
देशमा भइरहेको स्थानीय तहको निर्वाचनलाई कसरी मुल्यांकन गरिरहनु भएको छ ?
— स्थानीय तहको निर्वाचन पनि बाह्य शक्तिकै प्रभावमा भइको बुझिन्छ । किनकी यो संविधान विदेशी प्रभावबाटै आएको हो । यही संविधान कै अधिनमा रहेर निर्वाचनहरु भइरहेका छन् । किनकी यो संविधान बाहिरकै स्वार्थमा गरइएको ग्रयाण्डडिजइन हो । यदि यो स्थानीय चुनाव प्रदेशको चुनाव र केन्द्रीय चुनाव नसकेको खण्डमा यो संविधान नै धरापमा पर्ने भएकाले विदेशीको स्वार्थमा निर्वाचनहरु भइरहेका छन् ।
आशातित रुपमा एकीकृत राप्रपा (राष्ट्रवादी)ले स्थानीय तहको निर्वाचनमा मत ल्याउन सकेन नि ?
— एकीकृत राप्रपा राष्ट्रवादी यो हाम्रो भर्खर जन्मेको पार्टी हो । त्यसैले गर्दा हाम्रो चुनावी परिणाम भन्दा पनि हाम्रो पहिचान, विचार र सिद्धान्तबाट जनताको माजमा पु¥याउन खोजिएको हो । आगामि दिनमा हाम्रो विचार र सिद्धान्तलाई जनताको माझमा लगेर आगामि चुनावमा हामीले हाम्रो एजेण्डालाई स्थापित गर्नेछौं, हामी जित्दै जानेछौं । हाम्रो पार्टीको मुल एजेण्डा हिन्दु राज्य र राजसंस्था हो । यो एजेण्डालाई हामीले छाडेका छैनौं । हामी आगामि निर्वाचनमा पनि जनतामाझ जानेछौं ।
तपाईं राष्ट्रिय युवा शक्तिको अध्यक्ष हुनुहुन्छ, युवाहरुलाई संगठित गर्न के–के योजना छन् तपाईंसँग ?
— धर्म संस्कृति हाम्रो र हाम्रो पहिचानको विषयमा विभिन्न प्रशिक्षण दिएर सवै युवाहरुलाई राष्ट्रवादी धारमा ल्याउने कोशिस गरिरहेका छौं । वास्तवमा देशका युवाहरुलाई आफ्नो देश, धर्म, संस्कृति के हो भन्ने थाहै छैन । र युरोपियनहरुले युवाहरुलाई जानीजानी रनभुलमा पारिरहेका छन् । धर्म प्रचार गर्न लगानी गरिरहेका छन् । त्यसैले अब यसप्रति तमाम नेपाली राष्ट्रवादी युवाहरु संगठित हुने बेला आएको छ । युवाहरु बाध्यताले विदेशमा कामगर्न जानु परिरहेको छ । किनकी हाम्रो अज्ञानताका कारण यो अवस्था आएको हो । साथै हामीले अब युवाहरुलाई हिन्दू राज्य र राजसंस्थाका बारेमा बुझाउन ढिलागर्नु हुँदैन ।
वर्तमान सरकारलाई कसरी मुल्यांकन गर्नुहुन्छ ?
—यो सरकार अहिलेसम्म कै नालायक छ । किनकी प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीसम्म विदेशी प्रभावमा चलिरहेको देखिन्छ । चुनावमा ठुला दलका गठबन्धनले कस्तो नालायकी देखाए त्यो हामीले देखेकै हो । माओवादीले कांग्रेसलाई भोट हाल्ने, कांग्रेसले माओवादीलाई भोट हाल्ने गरे । त्यो सत्ता टिकाउन कै लागि हो । होइन भने खोइ सिद्धान्त र विचार ? कुनैबेला शेरबहादुर देउवाले माओवादीको टाउकाको मुल्य तोकाकै थिए । माओवादीले पनि कांग्रेसका धेरै कार्यकर्तालाई विस्थापित गरेकै थिए । अब यो कस्तो विडम्वना ? अहिले आएर एकैठाउँमा घाँटी जोडेर बसिरहेका छन् । यो पनि बाह्य शक्तिकै खेलको परिणाम हो । र कालेकाले मिलेर खाउँभाले भन्ने उखानलाई चरितार्थ गरेका छन् ।
राप्रपाहरु फुटीरहेका छन्, यहाँले यसलाई कसरी मुल्यांकन गर्नुभएको छ ?
— राप्रपाहरु फुट्नुमा यो ठुला नेताहरुको जुँगाको लडाईं अनि घमण्डको परिणाम हो । त्यसै कारणले राप्रपाहरु फुटिरहेका छन् । यो टुटफुटमा पनि विदेशीकै हात छन् । किनकी विदेशीलाई हामी राष्ट्रवादीहरु एकै भएको मन परेको छैन । यसैको परिणाम पनि राप्रपाहरु फुटीरहेका छन् । हिन्दू राज्य र राजसंस्थाको पक्षमा एकमत रहेका राप्रपाका नेता तथा कार्यकर्ता मिल्नुपर्ने मैले महसुस गरिरहेको छु ।
तेस्रो चरणको स्थानीय तहको निर्वाचनमा एकीकृत राप्रपा (राष्ट्रवादी)लाई जिताउन के–के गर्दै हुनुहुन्छ ?
— स्थानीय तहको निर्वाचनमा हाम्रो पार्टीले जित्नु भन्दा पनि हाम्रो सिद्धान्त र एजेण्डालाई गाउँशहर, टोलटोल र व्यक्तिव्यक्तिमा पु¥याउने हाम्रो अठोट छ । र एकदिन यसको राम्रो परिणाम देखिने छ । हम्रो पक्षमा जनमत बढ्दै गएर एकदिन हाम्रो पार्टी केन्द्रीयस्तरमा पनि प्रभावशाली रुपमा स्थापित हुने छ ।
फुटेका राप्रपाहरु अब मिल्ने सम्भावना छैन ?
— अब जुन राप्रपाहरु फुटीरहेका छन् यि राप्रपाहरु यथास्थिति मै एकीकृत हुने सम्भावना म देख्दिन । किनिकी यसको कारक तत्व भनेको कमल थापा नै हुन् । उनको तानाशाही एकल निर्णय, घमण्ड र मान्छेलाई मान्छे नगन्ने चरित्रले गर्दा राप्रपा फुटिरहेका छन् । त्यसैले अब कमल थापासँग राप्रपा एकीकरण हुने कुनै सम्भावना म देख्दिन ।
तपाईंहरु आफूलाई राजावादीको रुपमा प्रस्तुत गरिरहनु भएको छ, खासमा राजावादी को हुन् त ?
— हामी राजावादी भन्दा पनि राजसंस्थावादी हौं । राजसंस्था भनेको जनताको अभिभावक हो । तर अहिले अहिले राष्ट्रप्रमुख राष्ट्रपति । उनैलाई अभिभावक मान्नुपर्छ । तर राष्ट्रपति कुनै न कुनै पनि पार्टीको हुने भएकाले देशको अभिभावकको लागि स्वतन्त्र राजसंस्था चाहिकाएको हो । देश अहिले विना मियोको दाई जस्तो भएको छ । भ्रष्टाचारले सीमा नाघेको छ । काठमाडौं शहर हेरौं खाल्डा र खुल्डी हिलोले लोतपोत भइरहेको छ । कति मान्छेको त खाल्डोमा परेर ज्यानै गयो । अब हेरौं खोइ त देशको अभिभावक ? यसतर्फ कसैको वास्ता छैन । यसै मेसोमा हेर्ने हो भने अब राजसंस्था फर्किने नफर्किने जनताको चाहनामा भरपर्छ । राजाले चाहनु भन्दा पनि नेताहरुकै कारणले गर्दा राजसंस्था छिट्टै फर्किने हामीलाई लागेको छ । देशको विकराल स्थिति हेर्दा जनताहरु वाक्कदिक्क भइसकेका छन् । र राजा राजसंस्थालाई सम्झिरहेका छन् ।
एकीकृत राप्रपा (राष्ट्रवादी)को विदेशी मुलुकहरुप्रति हेर्ने दृष्टिकोण बताइदिनुस न ?
— राम्रो कुराका लागि विदेशी मुलुकसँग हातेमालो गर्नैपर्छ । किनकी अहिलेको संसार भुमण्डलीकरणमा आधारित छ । केही न केही रुपमा यसअर्थमा हामीले विदेशी शक्तिसँग पनि राम्रो कुरामा सहकार्य गर्नुपर्छ । यदि विदेशी मुलुकहरुलाई दाइ भनेर मान्दा मान्दै पनित उसले पनि हामीलाई त्यही रुपमा माया गर्नुप¥यो । हामी दाई भन्ने दाइले नचाहिंदो हस्तक्षेप गर्नुभएन । यदि यस्तो गरिन्छ भने हामी स्वाभिमानी नेपाली कदापि झुक्ने छैनौं ।
देशमा गणतन्त्र आउनुमा विदेशी कै कारण हो भनिन्छ, तपाईंको बुझा के छ ?
— देशमा गणतन्त्र आउनुमा विदेशी कै हात हो भन्ने कुरा अत्यन्त सही हो । यसमा युरोपियतहरुको बढी हात छ । किनकी यो देशमा हिन्दूराष्ट्र फाल्ने, हाम्रो धर्मसंस्कृति निर्मुल पारेर धर्म परिवर्तन गराउन देशलाई गणतन्त्रसम्म पु¥याउन प्रमुख भूमिका खेलेको देखियो । यो देशमा राजसंस्था फाल्न पनि उनीहरुकै ठूलो हात छ । किनकी राजाको पालामा धर्म परिर्वतन गर्न प्रतिवन्ध लगाएको थियो । तर अहिले गणतन्त्र आइसके पछि खुल्ला रुपमा धर्म परिवर्तन भइरहेको छ । यसमा युरोपियनहरुले धेरै पैसाको खोलो बगाएका छन् । अहिले यसैको परिणाम यदि यस्तै तरिकाले धर्म परिवर्तन गर्दै जाने हो भने आगामि दशवर्ष पछाडि उनीहरुकै धेरै संस्था देशको निर्णायक स्थानमा पुग्नेछन् । अनि हामीले मनाउनँदै आएका महत्वपूर्ण चाडपर्व दशैं, तिहार, इन्द्रजात्रा घोडेजात्रा त्यो अवस्था के हुनेछन् ? हामी हाम्रो देशको कला–संस्कृति जोगाउँनको लागि सवै नेपाली दाजुभाइ दिदीवहिनीहरुलाई हामीसँग एकताबद्ध हुन आग्रह गर्दछौं । किनकी हाम्रो देशको राजसंस्था र हिन्दूराज्य फर्काउने सवैभन्दा स्पष्ट रुपले अघि बढेको पार्टी भनेको एकीकृत राप्रपा (राष्ट्रवादी) नै हो ।